Surprise Birthday Party | U.N.O.B
ကျွန်တော်များ UNOB အဖွဲ့၏ အကြံပေးလူကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်သော ဆရာဦးဖေသန်းမောင်၏ (Surprise birthday party) မွေးနေ့ပွဲကို 22 Jan 2011 နေ့ Plantation Country Club တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ UNOB အဖွဲ့မှ EC တစ်ချို့ တက်ရောက် ချီးမြင့်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာ၏ အဖွဲ့အပေါ် ကူညီမှုများ၊ လူငယ်များကို အားပေးတတ်သော စိတ်စေတနာများကို ကျေးဇူးတင်ခြင်းအားဖြင့် ဥက္ကဌ ကိုကျော်ဦးမှ လည်ကောင်း၊ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ကိုစိန်မြင့်အောင်မှ လည်ကောင်း အသီးသီး ဂုဏ်ပြုစကားများ ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ တက်ရာက်လာသူများနှင့် အလွန်စည်ကား သိုက်မြိုက်သော ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့တစ်ရက်ဖြစ်ကြောင်းကို ဓါတ်ပုံများမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် ပြောပြနေပါလိမ့်မည်။
pyone cho August 8, 2011 at 11:04 am Reply
HAPPY BIRTHDAY DATE IS WROUNG!!!ကျွန်တော်များ UNOB အဖွဲ့၏ အကြံပေးလူကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်သော ဆရာဦးဖေသန်းမောင်၏ (Surprise birthday party) မွေးနေ့ပွဲကို 22 Dec 2011 နေ့ Plantation Country Club တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ UNOB အဖွဲ့မှ EC တစ်ချို့ တက်ရောက် ချီးမြင့်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာ၏ အဖွဲ့အပေါ် ကူညီမှုများ၊ လူငယ်များကို အားပေးတတ်သော
Administrator August 9, 2011 at 8:23 am Reply
NO TWO February 9, 2011 at 9:40 pm Reply
We do wish that healthy,wealthy & happiness with your lovely family.
ko zaw gyi & ma nge lay
Than Naing January 27, 2011 at 4:38 pm Reply
Long Live With Healthy Uncle Pe Than Maung !